Hetra Vaovao ao Makedonia Manery ny Mpiasatena sy ny Asa Ampaha-Potoana Hidina An-dalambe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Desambra 2014 21:23 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, русский, Français, Español, Română , English
“Tsia amin'ny fakam-bolan'ny fitondra-panjakana” – sora-baventy nandritra ny fihetsiketseha-panoherana tao Skopje, Makedonia, 22 Desambra 2014. Saripika: F. Stojanovski, CC BY.
Makedoniana anarivony maro no nidina an-dalambe ny afovoan-tanànan'i Skopje tamin'ny 22 Desambra ho fanoherana ny hetra vaovao izay mitaky anjara biriky ho an'ny fanjakana amin'ny vola fisotroan-dronono sy ny fahasalamana. Ny hetra vaovao dia hampiharina amin'ny vola raisin'ny asa mahaleotena sy fanampin'ny hetra amin'ny fidiram-bola manokana hafa, mihatra manomboka amin'ny 1 Janoary 2015. Ao amin'ny firenena manana tahan'ny tsy fananana asa efa hahatratra 29 isan-jato tamin'ny telovolana faharoan'ny taona 2014, dia ny asa mahaleotena sy asa ampaha-potoana no hany vonona hoan'ny olona maro dia maro.
Namorona hetsika Facebook nahazo fampielezana mihoatra ny in-5000 ny mpikarakara ny hetsi-panoherana ary nampiasa ny diezy #ПротестХонорарци (#ProtestFreelancers) ao amin'ny Twitter sy Facebook. Mialoha ny hetsi-panoherana, naneho ny fanohanany ny Fikambanan'ny Makedoniana mpandikateny, ny sendikàn'ny mpanao gazety tsy miankina, fikambanana ankavia Lenka sy Firaisankina, ny Student Plenum, ary ny fikambanana hafa. Nanatevin-daharana ireo mpandray anjara amin'ny hetsi-panoherana ireo ny olo-malaza maro, anisan'izany ny mpanakanto, mpitendry mozika, ireo mpikatroka mafàna fo, ary mpandraharaha, izay mpiasatena ihany koa ny maro amin'izy ireo.
Nandeha nitsidika ny Parlemanta, Ny Minisiteran'ny Asa sy ny Fanaovan-dalàna sosialy, ary ny lapan'ny Governemantan'ny Repoblikan'i Makedonia ny mpanao fihetsiketsehana. Tsy nisy ny valiny ofisialy avy any amin'ny manampahefana.
“Maka amin'ny mahantra hanomezana amin'ny manankohariana!” – misy mpanao fihetsiketsehana sasany mampifandray ny Praiminisitra Minister Gruevski amin'ny hiakan'ny “Robin des Bois mitsongoloka.” Skopje, Makedonia, 22 Desambra 2014. Saripika: F. Stojanovski, CC BY.
Ny mpanohitra ny hetra milaza fa hisy fiantraikany mivantana amin'ny mpiasa io, nefa ara-teknika ny hetran'ny vola miditra sy ny fandoavana ny fiantohana ara-pahasalamana ao Makedonia dia mitontona any amin'ny mpampiasa. Miteny ny mpitsikera fa hamaly ny hetra vaovao amin'ny alalan'ny fampidinana karama fotsiny ny mpampiasa, indraindray hatrany amin'ny 35 isan-jato. Manahy ihany koa ny olona fa hitondra mankany amin'ny fanavakavahana izany, satria misy ny sokajin'asa maro , ka anisany ny manampahefana voafidy sy voatendry, tsy ampandoavina.
Tsy tian'ny olona ilay hetra noho ny antony maro hafa koa. Ny mpiasa nahazo mihoatra noho ny karama farany ambany indrindra, ohatra, dia tsy afaka hisoratra anarana hisitraka amin'ny tsy fananan'asa ny taona manaraka. Heverina hitambesatra any amin'ny sehatrasa tsy mitady tombom-barotra ilay hetra fanampiny, sy any amin'ny sehatry ny fampitam-baovao tsy miankina, izay zara raha misy ny loharanon-karena hanaovana fandaniana fanampiny. Araka ny lazain'ny mpanao hetsi-panoherana, ny hetra vaovao dia tsy hanatsara ny asam-panjakana ao Makedonia, fa hahabe fotsiny ny fandaniam-bolan'ny rafitra misy ankehitriny.
“Ampy hoan'ny tena ve?” Sary natao hampihomehy namboarin'ny MightyCreation Aleksandar Pesevski, CC BY-NC.
Araka ny pejin-danonana Facebook-n'ny mpanao fihetsiketsehana, dia tsy azo ekena noho ny antony maro ny hetra fanampiny atao amin'ny mpiasatena sy ny miasa amin'ny ampaham-potoana:
Hampiakatra ny fahantrana sy ny tsy fananan'asa ny fikasan'ny governemanta hampiditra ny fandraisana anjaran'ny asa-tena manomboka amin'ny 1 Janoary 2015. Ankilan'izany ny mpiasam-panjakana dia afaka amin'io adidy izay aneren'ny governemanta ny mety maty rehetra io, tsy misy fanazavana mitombina, ka mampiseho ny fisainan-dratsy tanteraka tanatin'ilay tsirin-kevitra.
Ny fangatahanay dia:
1. Ajanony ny fampiharana ny fitsipika vaovao… mba hamoronana sahatra hanovana sy hanariana azy.
2. Ampitomboy ny asan'ny Fanaraha-Maso ny Mpiasa ary mamantatra ny antony marina mahatonga ny asa-maizina, na ny fanambarana ho miasa tsy misy fifanarahan'asa na ny tsy fandoavana ny anjara biriky amin'ny fiarovana ara-tsosialy …
3. Akaro na foano ny fototry ny karama ambony indrindra hikajiana ny fototry ny kajy isam-bolana handoavana ny fandraisana anjara izay kirakiraina avy amin'ny mari-karama enina eo amin'ny ankapobeny.
Iza no ho tratran'ireo fanovan'ny mpanao lalàna ireo?
Maro ny olom-pirenena Makedoniana izay tsy manana fotoana ananana asa feno voatery hiady ho amin'ny [karama isan'andro], izay matetika sady tsy maharitra no tsy ambony. Tsy mba misitraka ny zon'ny mpiasa ny mpiasatena tahaka izany, [zo] mety amin'ny fananan'asa ora feno voasoratra ara-dalàna. Lavitry ny fisitrahana ry zareo ka anatin'ny sokajin'ny marefo, tandindonin-doza indrindra amin'ny sarangan'ny mpiasa. Raha vao manankery ireo fanovana avy amin'ny mpanao lalàna ireo, dia hampihena ny fandoany amin'ny mpiasa ny mpampiasa handoavany any amin'ny fanjakana ny anjara adidiny, izany no miteraka fampahantrana bebe kokoa. Azo heverina ihany koa, noho ny fisian'ny tsipika ambany indrindra mihamidina, dia maro ny olona ho voaroaka, ka hampitombo ny tsy fananana asa.
Ho tratran'ity fanovan'ny fanaovan-dalàna ity ny olona rehetra izay miasa ora feno sy ny olona rehetra hiasa rahatrizay! […]
Amin'ireo fanitsiana natao irey no governemanta dia mitady tsy hitodika any amin'ny olana lehibe indrindra ao Macedonia — ary izany dia ny fahantrana — fa tsy ny fampakarana ny habetsaky ny vola feheziny! Ny fanafody natolotra moa izany dia vao maika loza kokoa noho ilay aretina aza! Tsy tokony ho ala-olana sy ataon'ny governemanta sorona ny mahantra sy ny voatsindrihazolena hahafahany mamaha ny olan'ny famatsiambolan'ny Fisotroan-dronono sy ny Fiantohana raha voakilema ary ny Fiantohana ara-pahasalamana izay izy ihany no nanangana azy!
Nandany ny lalàna vaovao nandritra ny fivoriana manokana tamin'ny fotoam-pahavaratra farany teo ny parlemantan'i Makedonia, nandika ny fepetra mahazatra hanaovana fifanakalozan-kevitra sy ny hanontaniana ny hevitry ny mpandray anjara ao amin'ny sehatra voatonona. Niandry hatramin'ny oktobra ny politisianina hiatrehana ny fahasarotana maro ao anatin'ny fitsipika vaovao, fa nandà hanemotra ny fampiharana ny governemanta. Vao haingana izay, na izany aza, misy famantarana vitsivitsy hita tamin'ny mpanao lalàna fa mety hanaisotra indray ny tombontsoa sasantsasany hoan'ny mpiasam-panjakana ambony nampidirina tao amin'ilay lalàna ry zareo. (Noesorin'ny manam-pahefana tsy nisy fanazavana ao amin'ny tranonkalan'ny tahirim-bolam-panjakana ny teny mety mampihatra izany zo izany.)
Mpiseran'ny media sosialy sasany miampanga ny fanampiana fifanarahana manavakavaka sy tsy mifanaraka amin'ny lalampanorenana ao amin'ny fitsipika vaovao, hanaovana adi-varotra izay azon'ny fitondrana tsipahina fotsiny avy eo, ho fomba iray hampandriana adrisa ny vahoaka .
“Tonga ny Afobe raha afa-niteny hoe ‘Tsia!,’ ianao saingy nangina” – hetsi-panoherana teo anoloan'ny Governemantan'ny Repoblikan'i Makedonia, 22 Desambra 2014. Saripika: F. Stojanovski, CC BY.
Hatramin'izao, ny governemanta Makedoniana dia tsy nihontsona eo anoloan'ny mpanao fihetsiketsehana, eny fa na dia taorian'ny hetsi-panoherana faoben'ny mpianatra aza. Ny fidiram-bola nandrasana avy amin'io karazana fakam-bola vaovao io (eo ho eo amin'ny 68 tapitrisa euros) amin'ny ampahany sasany dia hamaha amin'ny fandaniana ara-pahasalamana ao amin'ny firenena sy ny fisotroan-dronono. Misy 2 tapitrisa ny olom-pirenena ao Makedonia, ary ny tetibolam-panjakana dia vesaran'ny ny karaman'ny mpiasa-panjakana 180.000, ary toy izany koa ny tombontsoa isan-karazany ho an'ny ampaha-mponina mandatsa-bato ho an'ny antokon'ny fitondrana, toy ny olona efa misotro ronono sy ny tantsaha izay mahazo fanampiana ara-bola avy amin'ny fitondram-pitantanana.